Maxaa sabab u ah in dhallinyarada Hindiya ay “Galmo u hanqal taagaan”? | Saxil News Network
Maxaa sabab u ah in dhallinyarada Hindiya ay “Galmo u hanqal taagaan”?
Image captionIn filimada anshax xumada ah la sameeyo ama la faafiyo sharci darro ayey ka tahay Hindiya
Muuqaalkaas gudihiisa waxaa lagu arkayay gabadha oo ka codsaneysa wiilasha iney sii daayaan, iyadoo adeegsaneysay erayga ” bhaiyya” (oo markii luqadda Hindiga laga soo fasiro uu macnihiisu yahay “Walaal”), balse waxaa la arki karay iney aad u faraxsanaayeen, aadna u qoslayeen.
Image captionIn ka badan 200 oo milyan ayaa Hinbdiya ku isticmaasha WhatsApp-ka
“Inta badan wiilasha fasalkeyga dhigta way daawadaan muuqaalladan, si wada jir ah iyo si kalinimo ahba”, ayuu yiri wiil kale.
Image captionAqoon yarida dhinaca galmada ayey dad badan u sababeeyeen dhibaatada
“Markii aan soo koreynay nalama siinin waxbarasho ku saabsan aqoonta dhinaca galmada ama sheekooyinka caadiga ah ee ay dadka waaweyn sameeyaan”, ayey tiri Paromita Vohra, oo filimada qorta.
400 oo million oo ruux, oo ka mid ah dadka ku nool Hindia waxay isticmaalaan taleefannada gacanta ee casriga ah, in ka badan kala bar ka mid ah dadkaasna waxay isticmaalaan barta WhatsApp-ka, taasoo ay sahlantahay in la iskula wadaago muuqaallada noocaas ah